बेलायतले चीनलाई दियो प्रतिबन्ध लगाउने कडा चेतावनी — Imandarmedia.com
२नेकपा कसको ? कट्टेलको दाबीमाथि कस्तो आउला सर्वोच्चको फैसला ?
३स्वस्थानी ब्रत आज समापन गरिँदै
४आज र भोलि पहाडी भेगमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना
५विश्वभर ८ करोड ९५ लाखभन्दा धेरैले जिते कोरोना
६चिनियाँ सरकारले मुस्लिम अल्पसंख्यक उईघुर जाति माथी नरसंहार गरिरहेको बेलायती प्रतिवेदन सार्वजनिक
७भारत र चीनका विदेश मन्त्रीबीच ७५ मिनेट फोन-वार्ता
८१३ वर्षीया बालिका बलात्कर गरेको आरोपमा एक युवकलाई १८ वर्ष कैदको फैसला
९काठमाडाैंमा फेरि बर्डफ्लु देखियाे, कुखुरा र दाना नष्ट
१०मलेसियामा कोरोना विरुद्धको पहिलाे भ्याक्सिन शुरू
१२दक्षिण कोरियाले देशव्यापी कोरोना खोप सञ्चालन गर्दा नेपाली खुशी
बेलायतले चीनलाई दियो प्रतिबन्ध लगाउने कडा चेतावनी
काठमाडौं । अल्पसंख्यक उइगर मुसलमान समुदायमाथि चीनले गरिरहेको चरम दमन नरोको उसलाई प्रतिबन्ध लगाउने बेलायतले कडा चेतावनी दिएको छ । बेलायतका विदेश सचिव डोमिनिक रावले बीबीसीसँगको कुराकानीमा अल्पसंख्यक उइगर मुसलमान समुदायको चरम मानवअधिकार हनन् गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
चीनले आफ्ना गतिविधि तत्काल सुधार नगरे चीनमाथि प्रतिबन्धहरु लगाउनेसमेत उनले चेतावनी दिएका छन् । लामो समयदेखि चीनले अल्पसंख्यकहरुमाथि दमन गरेका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएपनि त्यस्ता व्यवहारमा सुधार नल्याएको डोमिनिकको आरोप छ ।
बेलायतका लागि चिनियाँ राजदूत लियू सियामिङले भने विदेश सचिव डोमिनिकको आरोपको खण्डन गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । बेलायतका केही सञ्चारमध्यमले उइगर मुसलमानहरुलाई चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा रहेका शिविरमा राखेर चरम यातान दिएको भिडियो सार्वजनिक गरेको बताइएपनि त्यसको स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि हुन नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
चीनले अल्पसंख्यक समुदायको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न भन्दै महिला तथा पुरुषहरूलाई अनुमति बिना परिवारनियोजन गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । यसैबीच विश्वभर १ करोड ४६ लाखभन्दा बढी मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ ।
एकै दिन २ लाख २० हजार ७३ जनामा संक्रमण देखिएसँगै सोमबार बिहान यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या १ करोड ४६ लाख ४० हजार ३२६ पुगेको छ । वर्ल्डोमिटर्सका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ३१६ जनाको कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भएको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ६ लाख ८ हजार ८५४ पुगेको छ ।
सोमबार यो समाचार तयार पार्दासम्म संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ८७ लाख ३० हजार ३४८ पुगेको छ । कोरोना भाइरसकै संक्रमणबाट युरोपियन मुलुकहरूमा १ लाख ९९ हजार ८७ जनाको मृत्यु भएको छ । २६ लाख ६९ हजार ३८१ जना संक्रमित भएकोमा १५ लाख ८८ हजार ७८८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
उत्तर अमेरिकी मुलुकहरुमा १ लाख ९६ हजार ६११ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमितको संख्या ४५ लाख ६९ हजार १४७ पुगेको छ । त्यसमध्ये २२ लाख १३ हजार १२९ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । यस्तै एसियाली मुलुकहरूमा ७९ हजार ८९५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
३३ लाख ९७ हजार ३२८ जना संक्रमित भएकोमा २४ लाख ११ हजार ४५३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा १ लाख १७ हजार ८९१ जनाको मृत्यु भएको छ । ३२ लाख ६५ हजार २९९ जना संक्रमित भएकोमा २१ लाख २२ हजार ८६४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
अफ्रिकी मुलुकहरूमा १५ हजार २१० जनाको ज्यान गएको छ भने ७ लाख २४ हजार ७०२ संक्रमित छन् । संक्रमितमध्ये ३ लाख ८३ हजार ३१६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
त्यस्तै अष्ट्रेलियासहित ओसिनियाका मुलुकहरुमा १४५ जनाको मृत्यु भएको छ । १३ हजार ७४८ जना संक्रमित भएकोमा १० हजार ५७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।